Miverina amin’ny laoniny | NewsMada
Miverina amin’ny laoniny
Io lohatenin’ity indraim-bava anio, ity io no azo ilazana ny toe-java-misy eto amin’ny firenena, tato ho ato. “Miverina amin’ny laoniny”. Inona ny miverina amin’ny laoniny ? Ny hery… famoretana, ny ramatahora ataon’ny fanjakana amin’ny alalan’ny fampiasana ny mpitandro filaminana, manoloana ny hetsika fanehoan-kevitra, ny fitakiana, ny fitokonana… Niaraha-nahita ny zava-nitranga teny amin’ny oniversiten’Ankatso, roa andro lasa izay. Tafiditra hatrany anatin’ny faritry ny oniversite mihitsy ireo mpitandro filaminana nanenjika ireo mpianatra nanao fitokonana, niaraka tamin’ny sendikan’ny mpampianatra (Seces) sy ireo mpandraharaha. Tsy vitan’izay fa niraraka ny toraka grenady lakrimozena nanempotra nila nahafanina ny maro. Tsy nahafaly ireto mpanao fihetsiketsehana izany, indrindra ny avy ao amin’ny Seces, noho ny hoe tsy fanajana ny lalàna amin’ny tsy tokony hitsofotsofohan’ny mpitandro filaminana ao anatin’ny faritry ny oniversite. Izay ilay hoe “franchise universitaire”.
Omaly indray, saingy tetsy Anosy, nanoloana ny trano boriborin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Toraka grenady lakrimozena maromaro no setrin’ny fanehoan-kevitra nanehoan’ny mpampianatra mitokona ny tsy fahafaham-pon’izy ireo tamin’ny fitakiana natao. Jenjina sy sempotra hatramin’ny olon-tsotra, eny hatramin’ny zaza sy ny ankizy madinika, tsy maintsy nandalo tamin’iny lalana iny.
Inona sy ahoana ary aiza indray ny tohiny ? Anio, rahampitso sy ny manaraka ? Asa, ho hita eo ihany izany fa ny azo ambara, miverina amin’ny laoniny indray izany ny fomba mahazatra ny fanjakana amin’ny fampiasana ny mpitandro filaminana amin’ny fanaovana ramatahora sy fampiasan-kery na hery famoretana manoloana ny hetsika fanehoan-kevitra sy fitakiana… eto amin’ny firenena. Miantsoantso, miangavy fitoniana ny mpitondra fanjakana. Mangataka ny fahatsiarovan-tenan’ny tsirairay. Izao anefa no ataony. Ny tenenin’ny vava hafa, ny ataon’ny tanana hafa. Iza marina àry izany no tena Rangory fototry ny tsy fitoniana ?